Ikhabhathi entsha nenomtsalane yeentaba enesauna - I-Airbnb
Ikhabhathi entsha nenomtsalane yeentaba enesauna
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguUnni
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uUnni iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ikhabhinethi ibekwe kwiyadi yekhabhinethi ezolileyo enombono we-Ustevatn kunye neentaba ezingqongileyo. Amathuba amaninzi okuhamba ngeenyawo kwiindawo ezintle zeentaba unyaka wonke kunye nomgama wokuhamba ukuya kwisikhululo sikaloliwe (i-15 min). Ebusika, kukho i-ski runs kanye ngaphandle kwe-cabin. Isiqalo esihle seRallarveien ehlotyeni, kwaye yimizuzu eyi-15 kuphela uqhuba ukuya kumathambeka e-alpine eGeilo. Kukho i-driveway yonke indlela eya kwi-cottage kunye nendawo yokupaka esisigxina. Kukho amagumbi okulala amane aneebhedi ezili-10 xa zizonke. I-cottage ine-wifi / indawo yeofisi kunye ne-sauna.
Ikhabhinethi intsha kwaye yanamhlanje inenkqubo yokungenisa umoya elinganayo. Ngaphandle kwegumbi lokuhlala kumgangatho ophantsi kukho isileyiti esihle esigqunywe kwipatio apho unokonwabela ilanga emva kohambo losuku. Igumbi lokuhlala kwi-1st kunye ne-2nd floor, itafile enkulu yokutyela kumgangatho we-1 kunye negumbi le-10. I-Langedrag, i-Bjørneparken, i-Dagali (i-rafting njl.) kunye ne-Tropicana ipaki yamanzi ayikude ukuba ufuna ukuchitha iinxalenye zeeholide zasehlotyeni. Apha.
E-Ustaoset uya kufumana ivenkile yokutya ethengisa izinto ezininzi. Kukwakho necafe encinci epholileyo, eKafé Presttun apho unokuodola khona isidlo sangokuhlwa esilula kwaye esibonelela ngokusetyenziswa kotywala. Kukho iinketho zokutshaja eGeilo ukuba uza nemoto yombane.
Umbuki zindwendwe ngu- Unni
Ndiyafumaneka kwiselula ngexesha lokuhlala kwakho ukuba unayo nayiphi na imibuzo.